ट्विटर - साप्ताहिक
साप्ताहिक संवाददाता , असार २, २०७६
मैले मिलन चाम्सको ह्याप्पी डेज भन्ने फिलिम हेर्या छु । मिल्ने भए यिनलाई जेल हाल्नुपर्थ्यो तेस्तो फिलिम बनाउने भनेर अनि प्रियंका र दयाहाङलाई नि कारबाही गर्नु पर्ने यस्तो फिलिममा खेल्ने जेपिटी स्कृप्टमा भनेर । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , जेष्ठ २५, २०७६
भूकम्पको भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिष पक्राउ हुँदा रेल र पानीजहाजको टिकट काट्न लगाउने मेलम्चीको पानी घर–घरमा बाँड्ने दिन घोषणा गर्ने तथा ग्यासको पाइप भान्छा–भान्छामा पुर्‍याउने भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषीहरूले मुख छोप्नु पर्ने होइन ? पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , चैत्र ३, २०७५
फागु खेल्न जान्ने, फागुका बारेमा जानकार बाग्लुङे/पर्वते कोइ हुनुहुन्छ ? फागु खेल्न परो, आम्नुस त । चिलाउनीको रुखमुनि बूढो कमिलो, तेरी आमा थारी भए ख्वाउ अमिलो । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन २९, २०७५
आमा, दिदी, बहिनी वा छोरीको साइनो देखाएर नागरिकतामा भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गर्न पाईंदैन, भुटानको प्रसंगसँग कुनै ताल्लुक छैन नेपालको नागरिकताको । पुरा पढ्नुहोस्
हामी सबैले मार्सल आर्ट, कराँते, फुटबल, साइक्लिङ, क्रिकेट तथा विभिन्न खेलहरू सिक्नै पर्ने हो, तर हामीले जिन्दगी भर सिरक ओढेर घोक्न सिक्यौं । अहिले अनावश्यक खोक्न सिक्यौं । ८० वर्षका पाका कुइरे साइकलमा मुक्तिनाथ घुम्न हिँडेको अनौठो देख्यौं– वीर गोर्खाली । पुरा पढ्नुहोस्
प्रहरीले बरामद गरेको सुन राजस्वमा पुग्दा तामा भयो
साप्ताहिक संवाददाता , माघ १२, २०७५
प्रहरीले बरामद गरेको चार किलो सुन राजस्वमा पुग्दा तामा । सुन बरामद गरेको भनेर प्रहरीले १९ पुसमा पत्रकार सम्मेलन समेत गर्‍यो, तर राजस्व अनुसन्धान भन्छ– प्रहरीले बुझाएको वस्तु सुन होइन, तामा र ढलौट हो । धादिङका एसपी डम्बर बिक भन्छन्– ‘सुन भनेरै बरामद गरिएको हो, तर राजस्वले सुन होइन भन्यो ।’ पुरा पढ्नुहोस्
मंसिर सकियो भन्दै पिर मान्दै र’छन् कोही–कोही यता । हैन कुन महिनाले कसलाई पो पर्खिएको थियो र मंसिरले पर्खियोस् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , मंसिर २३, २०७५
जागिर र गर्लफ्रेन्ड कहिल्यै अरूलाई खोज्न नलगाउनु होस् । राम्रो भेटे आफैंले राख्छन्, नराम्रो भए मात्रै तपाईंलाई टाँसो लगाउँछन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , मंसिर १६, २०७५
मनमा बसेको भए थोरै ख्याल राख्नु, समय मिल्यो भने याद गर्नु, मेरो त बानी छ, तपाईंलाई याद गर्ने । तपाईंको मन दुखाएको भए माफ गर्दिनु । पुरा पढ्नुहोस्
जाडो खाने बोको कता किन्न पाइन्छ
साप्ताहिक संवाददाता , मंसिर ९, २०७५
चुइगम पड्काउँदै ग्राहक कुर्नेहरू, धूलो खाँदै बस कुर्नेहरू, नजर छ आउँदै गरेको बसतिर, ग्राहकतिर । बस आउँदैन, रेट मिल्दैन, उफ् ! निराशा । यो रत्नपार्क, रातको रत्नपार्क, जाडो सहेरै भए पनि कुर्नु त छँदैछ, खटरा नै होस् गाडी, गन्तव्यमा पुग्नु नै छ । पुरा पढ्नुहोस्
हाम्रो जन्म चिठ्ठा हो
साप्ताहिक संवाददाता , मंसिर १, २०७५
अरू देशमा कण्डम कसरी नफुटाउने, फुट्यो भने के गर्ने सिकाउँछन्, हाम्रो चाहिँ कण्डम फुटाउने प्रतियोगिता रे । कति अब त्यही फुटेर जन्मिने हुन् । पुरा पढ्नुहोस्